Astiland- A Chinese achitungamirira mugadziri nokuda aesthetic midziyo yezvokurapa runako indasitiri, Isu opedza pachedu pakupa patani,RD, kugadzira rokutengesa kuti siyana mafomu sezvo pazasi:
Vascular Lesion Kurapwa
The ukama ruzivo dzinosanganisira the shockwave, IPL, Q-kushandisa rhodesia yag Laser, CO2 fractional Laser, RF, HIFU, Cryolipolysis, Photodynamic uye nezvimwewo.
Yakaneta yapera okutengesa maitiro, tava kutengeswa non-invasive runako kurapwa midziyo pamwe mufti-dzichipfekeka platforms pamusoro 30 nyika uye zvakanaka vairatidza nevakawanda sezvo kwayo vakachengeteka, nyore-oparesheni. Excellent-waivako uye unhu hupi.
"Quality ndihwo zvibereko" ndiyo musimboti vekwedu. Takanga certificated ne ISO 9000, ISO 13485, CE. Ose chete mishonga yedu zvakasimba yakabereka maererano dzakawanda yakachengeteka mureza. It kuwedzera kugutsikana kubva mutengi yedu yakazara mutsetse zvibereko yezvokurapa-kushandiswa, runako-care, musha-care uye runako basa.
Tinotarisa kuramba kutsvakurudza uye utsanzi pamusoro yepamusoro zvokurapa aesthetic Michina. Uye nguva dzose kutora zvikuru kuverenga QC basa &mutengi vaifarira kuziva. Tinoramba ichiwedzera inivhesitimendi pamusoro zvemichina, kushandisa zvigadzirwa mikana zvizere, kuvandudza basa, uye nguva dzose mukwanisi mushandi kurovedza kuronga uye chinokurudzira mashandiro ari zvebhizimisi, kuumba yepamusoro tarenda chikwata, kuti kuisa hwaro hwakasimba kwesayenzi uye munhu pfuma iri inogona kuenderera mberi chinangwa mune ramangwana.
Kunyatsoshanda ndiyo nyaya kunetseka shure-okutengesa edu chikwata. Tiri kuvavarira kugadzirisa dambudziko mukati pfupi nguva unopfuura kubva isu chaizvo kunzwisisa chii mukurumbira zvinoreva isu. It achisunda tiite zvose zvatinogona kuti optimize yedu basa uye unhu masimba.
Create tose, kuchiudzawo pamwe!
Astiland" Tinovimba vanhu vachanakidzwa zvakanakira yepamusoro aesthetic ruzivo, izvo zvinogona kuunza kuchinja uye chivimbo pachavo. Tiri kwete kambani, tinoita chikonzero dzvene. Pachokwadi tariro kushanda newe ruoko muruoko, vabudirire zvikuru kwakajeka basa mune remangwana zvokurapa aesthetic minda, uye nani mangwana.
CE advertising --- LVD
CE advertising --- EMC
Mhando II dzokurapa michina okutengesa rezinesi
Import uye ekisipoti kutengesa kodzero
boka redu vane vakadzidziswa zvakanaka waishandiswa rutsigiro chikwata. wevanamakanika edu ose vanokodzera uye zvachose yakadzidziswa edu hwokugadzira dhipatimendi.
Vose mukoti edu zvainyatsozivikanwa yakadzidziswa hwokugadzira dhipatimendi kuitira zvinhu zvedu kutumirwa pasina dambudziko.
Astiland inopa akasununguka basa kugadzwa nokuda vatengi itsva. Yomunharaunda mukoti kuchaita kukurukura mutengi kuti kuita chokugadza kusanganawo vatengi. kunze, nesuwo kupa midziyo kugadzwa, nokutumwa basa nokurayira zvekuchipatara oparesheni.
*Chete anoshandawo Astiland nhau nzvimbo kana Dealer basa nharaunda.
In zvinoitirwawo midziyo kwokuparara, kutaura wevanamakanika yekwataigara pakarepo kuti taronga mubvumirane. We hunovimbisa kuti,
pindura mukati 8 maawa
On the-nzvimbo mukati 48 maawa.
24-maawa rechengetedzo basa
(Kunze mitemo mazororo uye anokosha ezvinhu)
3. Operation nokudzidziswa rutsigiro
Kuti vachengete zvinobudirira yawapiwa. Tinoda rubatsiro kwete chete kubva Hardware yakanaka. Asi akarurama uye unyanzvi zvekuchipatara akavhiyiwa sezvo makirisito makwikwi. Somunhu zvakaoma basa-chikwata, Tinodavira zvakasimba kuti ruzivo uye unyanzvi kunotoda kurapwa mudonzvo vachishoropodza.
Tinoramba kuvandudzwa midziyo zvekuchipatara unyanzvi pamusoro zvekuchipatara Data rakarongwa nyanzvi yose. Uye kugoverana kuti vatengi vedu kunzwa zvigadzirwa zvikuru akarurama uye kuva nechivimbo kuti zvinhu zvedu. Zvichakadaro, isu hanya inofambiswa kubva nemhosva yedu. Tichakurukura muchidimbu zvose mibvunzo nevatyairi uye kushanda navo panze uye kugoverana nemakasitoma.
Medical aesthetic Michina iri kukura nokukurumidza, itsva Michina kuchaunza itsva musika chinodikanwa. Isu achasuma zvigadzirwa zvitsva uye mabasa nenguva, uye zvinopa itsva mashandiro naro uye kudzidzisa mabasa. Panguva imwe, nesuwo kubvuma vagotengeseranamo-mabasa.
Kusanganisira promotional kopi, zvekunamira, Video, rezinesi nezvimwe zvinhu
Muzvitsaurirei runako musika akavhiyiwa riri akakodzera China, kubatsira kunaka Salon Kurumidza tsvaka nangananga musika
Vanopa rutsigiro musika mabasa inobva kushandiswa zvigadzirwa, kubatsira awane migumisiro yakanakisisa
Official Website, Wechat, Facebook, Youtube nevamwe nhau kusunda, kusangana, nezvimwewo.
Company zvekuchipatara mudonzvo nhungamiro
Hospital kunotoda nyanzvi rutsigiro munharaunda
Bata zvenharaunda nokudzidziswa kirasi